Sergio Ramos oo markii ugu horeesay gaaray xerada tababarka ee kooxdiisa Real Madrid – Gool FM
Arsenal oo guul ka soo heshay kooxda Wolverhampton oo ay ku booqatay Molineux Stadium … +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Chelsea iyo Watford ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Juventus oo guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Torino xilli Ronaldo iyo Dybala ay markale shabaqa gaareen… +SAWIRRO
RASMI: Liiska xiddigaha Kooxda Real Madrid ay kala qeyb galayso kulanka Athletic oo lagu dhawaaqay & Hazard oo hoggaaminaya xiddigaha ka maqan
Manchester United oo garoonkeeda Old Trafford ugu awood sheegatay kooxda Bournemouth… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Wolverhampton iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Man United iyo Bournemouth ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
“Waa in labadan shaqsi ay ku soo laabtaan kooxda Barcelona” – Xavi Hernández
RASMI: Liiska xiddigaha Kooxda Barcelona ay kala qeyb galayso kulanka Villarreal oo lagu dhawaaqay… (Arthur oo ka mid ah & Umtiti oo maqan)
RASMI: Kooxda Arsenal oo heshiis cusub ka saxiixatay Weeraryahankeeda da’da yar ee Gabriel Martinelli
Sergio Ramos oo markii ugu horeesay gaaray xerada tababarka ee kooxdiisa Real Madrid
Dajiye August 1, 2018
(Real Madrid ) 01 Agoosto 2018. Real Madrid ayaa halkeeda kasii wada diyaar garowgeeda ku aadan xili ciyaareedka cusub ee 2018/2019, waxayna haatan ku sugan tahay dalka Mareykanka.
Shabakada rasmiga ah ee kooxda Real Madrid ayaa lagu shaaciyay in ciyaartoyda Julen Lopetegui ay dib ugu soo laabteen xerada tababarka kadib kulankii Manchester United ee koobka International Champions Cup.
Real Madrid ayaa la kulantay guuldaro 2-1 kulankii International Champions Cup ay kula ciyaareen kooxda reer England ee Manchester United.
Waxaa tababarka saakay ee kooxda Real Madrid lagu dhex arkay kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos, kadib markii uu kasoo laabtay fasaxiisa xagaaga.
Si kastaba Sergio Ramos ayaa la ciyaari doono kooxda Real Madrid xili ciyaareedkiisa 13-aad uu ku qaadanayo Santiago Bernabéu, wuxuuna sidoo kale xiran doonaa calaamada kabtanka xili ciyaareedkiisa 4-aad ee xiriir ah, taasoo ka dhigan tan iyo markii uu baxay Iker Casillas.
Shaxda rasmiga ah ee Chelsea vs Arsenal (International Champions Cup)
Zico oo talooyin muhiim ah u diray Vinícius Jr, isagoo dhinaca kale u rajeeyay inuu ku guuleysan doono kubada cagta Yurub